Ikhabethe Elihle Eduze kweMineral del Chico - I-Airbnb
Ikhabethe Elihle Eduze kweMineral del Chico
Mineral del Chico, Hidalgo, i-Mexico
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Edgar
U-Edgar Ungumbungazi ovelele
Sesivele sine-WiFi !! Ikhabethe elihle maphakathi nehlathi, imizuzu eyi-10 ukusuka eCentro de Mineral del Chico, imizuzu eyi-10 ukusuka eReal del Monte, imizuzu engama-30 ukusuka eHuasca kanye nemizuzu engama-20 ukusuka edolobheni lasePachuca. Londoloza ngesikhathi osithandayo. Woza ukhohlwe ukucindezeleka kwedolobha ngombono omuhle wehlathi, lizungezwe izihlahla zikaphayini, ekahle ukuhamba ngezinyawo, ukuhlela izoso nomndeni, ebusuku ungakhanyisa iziko ukuze ukhohlwe amakhaza. Ideal for imibhangqwana, umndeni noma bamazwe. Ilungele Izilwane ezifuywayo!
Ikhabethe linezitezi ezi-2, phansi, ikhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo enkulu, igumbi lokugezela eliyingxenye, esitezi esingaphezulu amakamelo ama-2 igumbi elinobude obuphindwe kabili kanye nombono wenkundla engasetshenziswa njengosofa / umbhede kanye nekamelo lokugezela ephelele, has a engadini esikhulu endaweni ukuba hlupha inyama. Ilungele izingane nemindeni. (Intengo ekhethekile yezinsuku zeviki)
4.66 · 79 okushiwo abanye
Itholakala endaweni enamasu eduze kwasePachuca, Mineral del Chico, Real del Monte kanye neHuasca, kodwa uma ufika ekhabetheni ngeke ufune ukuyishiya.
Ngiyatholakala nganoma imiphi imibuzo noma ukuphawula ku-WS yami, nganoma yisiphi isikhathi.
UEdgar Ungumbungazi ovelele